အက်ဆေး | Calm Hill
Navigation Menu	တပည့်များနဲ့ခဏတာ
Posted by CalmHill in ကျွန်တော်အကြောင်း, ကြုံရပလေကွယ်, ခရီးသွားမှတ်တမ်း, အက်ဆေး ရန်ကုန်ကိုအလုပ်နဲ့ ခဏရောက်ဖြစ်တော့ ဝေးဝေးမသွားနိုင်ပေမယ့် ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ စာသင်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ တပည့်တွေနဲ့ ပြန်တွေ့ခွင့်ရလိုက်တာ အမြတ်ထွက်တယ်လို့ဆိုရမယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ရန်ကုန်မသွားဖြစ်သေးခင် ၂ ပါတ်လောက်မှာ စာသင်ပေးဖူးတဲ့ တပည့်တစ်ယောက်က မှတ်မှတ်ရရ ရန်ကုန်ရောက်ရင် ဖုန်းဆက်ပါလို့ အီးမေးတစ်စောင်ပို့ထားတယ်။ ရန်ကုန်ရောက်ပြီး နောက်တစ်ရက်ပဲ ဖုန်းဆက်လိုက်တော့ သူတို့လည်းဘယ်လိုမှ မထင်ထားမိတော့ အတော်အံ့ဩသွားပြီး ညနေပိုင်းပဲလာခဲ့မယ်ဆရာဆိုပြီး တပည့်စုံတွဲ ရောက်လာတယ်။ တကယ်တော့ စာသင်ပေးဖူးလို့သာ တပည့်လို့ပြောရတယ် ကိုယ်နဲ့ရွယ်တူပါပဲ။ ဒီလိုပဲမုန့်စားရင်း ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေပြော ဝမ်းသာအားရနဲ့ပေါ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်ကိုပြန်ရောက်သွားလို ခံစားလိုက်မိတယ် ပြန်ခါနီးနှုတ်ဆက်တော့ ဆရာအသက်ကြီးသွားတာ နည်းနည်းသိသာသွားပြီပြောမှ ပစ္စုပ္ပန်ကိုသတိရတော့တယ်။ ဒီလိုပဲပေါ့ အချိန်ဆိုတာ ရုပ်ဝတ္ထုတွေကို တိုက်စားသွားနိုင်တယ် မဟုတ်လား။ တပည့်တစ်ယောက်က အွန်လိုင်းမှာတွေ့လို့နှုတ်ဆက်လို့ နင်ဘယ်မလဲမေးမိတယ် ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ ငါလည်းရန်ကုန်ရောက်နေတယ်လို့ ပြောလိုက်မိတော့ အခုလာခဲ့မယ် လှည်းတန်းဆိုရင် ၁ နာရီအတွင်းအရောက်ဆိုပြီး စိတ်မြန်လက်မြန်နဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်ကဆင်းသွားလေရဲ့။ တကယ်တော့သူက တပည့်ထဲမှာ သက်တမ်းအရှည်ဆုံး တပည့်ထဲကတစ်ယောက်ပဲ ၅ နှစ်လောက် စာသင်ပေးခဲ့ဖူးတယ် နောက်ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းရဲ့ညီမ အိမ်နာမည်ပဲသိတော့ တစ်ခါက Facebook မှာပြန်တွေ့တယ် နာမည်အရင်းနဲ့ဖြစ်နေတော့ ဘယ်သူပါလိမ့်လို့ အတော်စဉ်းစားယူရတယ်။ ၁ နာရီအတွင်းလာမယ်ပြောတယ် သို့ပေမယ့်ရောက်မလာတော့ အလုပ်ဆက်လုပ်နေမိတယ် ရုတ်တရက် ဆရာဆိုပြီး လူအများကြီးအော်ခေါ်တာ ကြားလိုက်မိတော့ လာမယ်ဆိုတဲ့တပည့်က သူတို့အတူတူစာသင်ခဲ့ကြတဲ့ တစ်ခြားလူတွေကိုပါ လိုက်ရှာပြီးခေါ်လာတာ လူအကုန်မဟုတ်ပေမယ့်…read more
Oct.02 5	အိမ်လွမ်းသူ
Posted by CalmHill in တဂ်ဒုက္ခများ, အက်ဆေး “ရေလှာလည်း ခင်းပြန့်ကြည်လင်စေ မိုးဦးလည်း လှပသာယာစေ ဘဝစေရာတာဝန် ကျေပွန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတို့ ရေစုန်ကိုဆန်ကာပြန်ခဲ့ပြီ …..” ခင်ဝမ်းသီချင်းက တိုးတိုးလေး ဖွင့်ထားသံ ကြားတယ် စားပွဲပေါ်မှာ လက်ဘက်ရည်တစ်ခွက်၊ ရေနွေးကြမ်းဓာတ်ဘူးနဲ့ အကြမ်းပန်းကန်တစ်လုံး။ ဆိုင်ဒေါင့်က ချောင်ကျကျစားပွဲမှာ ထိုင်လို့ပေါ့ လူရှင်းနေတဲ့ဆိုင်ထဲမှာ ဘယ်ကိုကြည့်မှန်းမသိပဲ ငေးနေမိတယ် ဒီလိုအချိန်မျိုး ပြန်မရနိုင်တော့ဘူးလို့ ထင်နေမိတာပါ။ သြော်… ငါမဟာနွယ်မှာ ရောက်နေတာပဲ။ စားပွဲထိုးညီလေးရေ အစ်ကို့ကို ပူတီတစ်ပွဲပေးပါဟ။ ဟေ…. ပူတီမရဘူးဟုတ်လား သြော်… ဒါဆိုရင်ဒါ မဟာနွယ်မဟုတ်ပါလား။ “နာမည်ဆန်းတဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် အလွမ်းကဖီးလို့ ပေးထားတယ် အချစ်ဆုံးမင်းနဲ့အတူ အမြဲသောက်တဲ့ ဒီဆိုင်လေး …..” ဂျေညီညီသီချင်းဖြစ်သွားပါလား။ သြော်…. မိန်းထဲက ရူဘီမှာရောက်နေတာပဲ။ ဘေးဘယ်ညာလှည့်ကြည့်တော့ အမေ့ဓောတ်ပုံတွေထဲမှာ တွေ့တွေ့နေတဲ့ တိုင်လုံးကြီးတွေနဲ့ ပင်မအဆောက်အဦးပါလား၊ ဒီဘက်မှာကစာသင်ဆောင်တွေ၊ ဟိုး… ဘက်မှာက လူမရှိတဲ့ လူနေဆောင်တွေ၊ နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ်ထဲတော့ မဝင်တော့ပါဘူးလေ ဆရာနဲ့တိုးရင် လာတက်ဦးခေါ်နေဦးမယ်။ ဟေ့… စားပွဲထိုးညီလေးရေ အစ်ကို့ကို မုန့်တီတစ်ပွဲပေးကွာ။ ဟေ… မုန့်တီမရှိဘူး ကြာဇံသုတ်ပဲရတယ်ဟုတ်လား အေး… ကျေးဇူးပါညီလေးရယ် မယူတော့ပါဘူးကွယ်။ “ရိုးရိုးလေးသာ ဝတ်ခဲ့ပါကွယ် အေးမြလို့ ကျင်လည်ရာလူ့လောကမှာ အပူမီးနဲ့အတူ လှုပ်ရှားရုံးကန် ဟန်လုပ်ပြုံးရခြင်းတွေ စွန့်ပစ်ခဲ့မယ်သွားကြမယ်လေ ဘုရားဖူးစို့ …” ဟောဗျာ ခင်မောင်တိုး ဖြစ်သွားပြန်ပြီ။ ဒါကဘယ်မှာလဲ ငါ… အောင်တော်မူထဲရောက်နေတာပဲ ကဖီးဘလူးမှာ…read more
Dec.18 9	Copy of အလွမ်းနာ
Posted by CalmHill in အက်ဆေး မနက်မိုးလင်း အိပ်ရာထ စားစရာကြည့်ပြန်ပါလျင် ကြက်ဥပြုတ် ပေါင်မုန့် အလဲအလှယ်မရှိ ဒါတွေစားရမည့်အစား လမ်းထိပ်က မုန့်ပစ်သလက်နဲ့ အကြော်စုံကိုသာပဲ စားချင်တော့၏။ မုန့်တီဖတ် တစ်ဖတ်နှစ်ဖတ် အပိုပါသွားသဖြင့် ပြန်ပြန်နှုတ်လေ့ရှိသော မုန့်တီသည်မဆီမှာသာ အသားနည်းပြီး ပဲမှုန်များနေသော မုန့်တီသုတ်သာ စားချင်တော့၏။ အလေးခိုးလေ့ရှိသော ပဲပြုတ်သည်အဒေါ်ကြီးထံမှ ပဲပြုတ်ဖြင့်သာ နနွင့်ထည့်ကြော်သော ထမင်းကြော်ဝါဝါလေးသာ စားလိုတော့သည် စီးတီးဟောမှ ရေခဲသေတ္တာထဲမှ ပဲပြုတ်ခပ်ကြမ်းကြမ်းများကို ငါမမြင်လိုတော့ပြီ။ အချိန်တန်လျင် ကျောင်းဆိုသောအရပ်သို့ ငါသွားရပြန်သည် အဆောက်အဦးများ ကြီးမား၏ နည်းပညာများ ဆန်းပြား၏ဟု ဆိုကြသည်။ သို့သော် လမ်းမခင်းရသေးအဖြင့် မြေလမ်းဖြင့်ဝင်ခဲ့ရသည့် ငါ့ကျောင်းကိုသာ အောက်မေ့မိ၏ ဂိုဒေါင်သာသာ အဆောင်ကလေးများဖြင့် စာသင်ခန်းများကိုသာ တမ်းတမိသေး၏။ လေအေးပေးစက်ကြောင့် ချမ်းလွန်းသည့် စာသင်ခန်းသို့ရောက်သော်လည်း မီးမလာသဖြင့် ပန်ကာမလည်၍ စာအုပ်ဖြင့်ယပ်တောင် ခပ်ကာသင်ခဲ့ရသည့် စာသင်ခန်းကို သတိရမိသေးသည် တမ်းတမိသေး၏။ ကန်တင်းဆိုသော အရပ်မှာကား အမြဲလူစည်ကား၏ အရာရာတန်းစီမှရသော အရပ်ပေတကား ပုံစံခွက်ထဲမှ ထုတ်သကဲ့သို့သော ဟင်းပေါင်းစုံကို တွေ့နိုင်သည် အမြင်သာကွဲမည် အဆင်သာကွဲမည် နေရာသာကွဲမည် မည်သည့်နေရာစားစား အနံအရသာ မကွဲပြားပါလေ။ ငါ့၏ ဗမာပါးစပ်နှင့် အခက်တွေ့လှသည် ချဥ်ချဥ်ငံငံစပ်စပ်စားလိုလှသည် ယခင်ကျောင်းတက်ခဲ့စဥ်က စားခဲ့ဖူးသော တစ်ခုတည်းသော ကန်တင်းမှ လက်ဘက်ထမင်းကိုသာ တန်းမစီပဲ လုကာယက်ကာ စားချင်တော့၏ ဟင်းမကောင်းသော်လည်း အမေထည့်ပေးလိုက်သော ခရမ်းချဥ်သီးငါးပိချက်၊ သရက်ကင်းနှင့် ကြက်ဥကြော်ကိုသာ စားချင်တော့၏။…read more
Aug.26 7	Calendar